October 2020 – KHAATUMO NEWS
waxaa halkan idinku soo gudbinayaa warkii tvga Darwiish oo warar xiisa leh oo deegaanka idin hayoContinue Reading
Daawo:Shirkadda Dahabshiil oo Lacag Ku Wareejisay Shirka Nabada Adhicadeeye,
Shirkada Dahab Shiil Group ayaa deeq lacageed oo gaadhaysa 8,000 $ oo dollar ku wareejisey gudiga Dhaqaalaha ee Shirka Nabadeynta Degmada Adhicadeeye ee gobolka Sool . Gudoomiyaha Shirkada Dahab-Shiil Group ee gobolka Sool C/Qani Awdaahir ayaa sheegay in ay ugu tala gashay in ay kaga qayb qaadato dhaqaalahan howlaha Shirkan.Continue Reading
Deg Deg Daawo:Beesha Fiqishini Oo Baaq Dagdag ah udirtay Ugaadhyahan
Guurtida iyo Cuqaasha Beesha Reer Fiqi-Shinni oo caawa Shir Jaraa’id ku qabtay magaalada Laascaanood ayaa Baaq Nabadeed iyo gogol ugu baaqey Beesha Ugaadhyahan . Suldaan Mustafe Maxamuud Awseed ayaa gogoshan dhigey magaalada Adhicadeeye ee gobolka Sool , Beesha Fiqishini ayaa mudooyinka Gogol nabadeed ugu baaqasay beesha Dhulbahante aan cidi ka aqbalin,Continue Reading
DAAWO:-Culimada Buuhoodle Oo Ku Dhawaaqday in la Dilo Qofkii Caaya Nebiga (NNKH)
Deg Deg:Muuse Biixi Oo Qoorta U Galiyay Bilad Duuliye Beesha isaaq usheegay inuu Duqayn Ka Daayay,
Madaxweynaha Maamulka Somaliland Buuse Biixi ayaa billad-sharafta ku maamuusay Duuliye Axmed Dheere, oo ahaa ninkii diiday in uu Hargeysa duqeeyo. Duuliyahan ayaa Sheegay in uu Beesha isaaq Ka daayay Diyaarad uu waday oo Maxamed Siyaad Barre ku amray inay Duqayso hargaysa islamarkaana taas badelkeeda uu ka dajiyay Diyaaradii Jabuuti, MuuseContinue Reading
War Deg Deg Ah:;-Maxaabiistii lagala Baxay saldhiga Laascaanood oo dil lagu xukumay .
Degmada Saaxdheer ee gobolka Sool ayaa maxkamad islaami ahi dil ku xukuntay laba kamid ahaa lix eedaysane oo loo haystay dilka laba nin oo ka dhacay kalabaydh gobolka Sool. Waxase cafiyay reerkii ay ka dhasheen raggii ay dilleen maaddaama ay gacan ku dhiiglayaashii oo ay kala soo bexeen saldhig boolisContinue Reading
War Deg Deg Ah Daawo:Weerar Dad Lagu Laayay Oo Ka Dhacy Faransiiska.
Saddex qof ayaa ku dhintay weerar toorrey loo adeegsaday oo ka dhacay magaalada Nice, ee dalka Faransiiska. Duqa magaaladaNice Christian Estrosi ayaa sheegay in hal qof loo xiray weerarkan oo goor dhow dhacay. Wasiirka arrimaha gudaha dalkaas Gérald Darmanin ayaa ka codsaday dadka inay ka fogaadaan goobta oo ku taallaContinue Reading
DAAWO:-Isaaq Lixle Laabta Ku Sita Ayay u Ciyaar Tagen Dhalintii Buuhoodle iyo laascaanood!!
Dhalinyarada Buuhoodle iyo laascaanood Ka orday ee Wiilka Lixde Laabta ku Sita La ciyaaray miyaa la odhan Kara waa mustaqbalka SSC. ”DAMIIR XUMO WAA WANO KALE” Rag kii aabohood gatay kuu dhalay oo adeerkiis oo Daarood dilay Laabka ku sita La ciyaaraya miyaan odhan karna dhalinta bari ee SSC!!!!!Continue Reading
Deg Deg: Xasan Sheekh Oo Safar Dhuumasho ah Ku Tagay Isra’iil.
Waxaa caasimada Maamulka Yahuuda ee Talabiib ka dagay madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, Warar Hoose oo khaatumoNews.com helayso ayaa sheegaya in Madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh, uu safar Qarsoodi ah ugu baxay caasimada Talabiib, Sidoo kale Xubno kamid ah Sirdoonka soomaaliya, ayaa sheegaya in ay helen xogta safarka TalabiibContinue Reading
Deg Deg Muuse Biixi Oo Weerar ku Qaaday Qaramada Midoobay.